ကိုပေါရဲ့ ပိတောက်ရိပ်၊ Ko Paw's Padauk-Yeik: “ရာဇဝင်ထဲမှာ အောင့်ကို ထားရစ်ခဲ့”
ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ ပေါ ရယ် အောင်လဲအသက်ကကြီးလှပြီ
ပေးသလောက် ရသလောက်ကိုပဲ ဒူးကလေးထောက်ကာ ခံယူ----မခံစားနိုင်တော့ဘူး------------ဌါနချုပ်ကို အမြောက်နဲ့ ထုကြ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
၂၀၁၀မှတ်ကျောက်မှာ ဘောင်းဘီချွတ်အောင်ရွှေတယောက် ထမီစွပ်ထားရမယ့် သမိုင်းဝင် သွေးကြောင်ပြလိုက်တာပါပဲ။
ဒါပေမယ့် NLD ထဲက ရဲရဲတောက်၊ ကိုယ်ကျိုးစွန့် အနစ်နာခံခဲ့တဲ့ ရဲဘော်ရဲဘက်များအားလုံးကို သိမ်းကျုံး မပြောကြစေလိုဘူး။ အဲဒီိ ပြည်သူ့သူရဲကောင်းတွေကို ဒီစာမျက်နှာပေါ်ကနေ ဦးညွှတ်လိုက်ပါတယ်။
From my view of point,I have already canceled U Aung Shwe from NLD's member list. He is suchacoward. NLD without Daw Aung San Suu Kyi??? If it happens, I will never give vote to NLD in the 2010 election.
By the way, Ko Paw, I would like to askaquestion. In 2010 election, (1)giving vote to one of the parties which are not concerned with this fucking military government and (2) giving no vote to any party----- which way will beabetter one? I would like to know what will happen to an average citizen if he doesnt give vote in the election? Thanks!!!
ကြားဘူးလား တွဲရေးခွဲရေး ဆိုတာ တို့ ဒိုင်အာခီတို့ ကို ခုလဲစစ်တပ်ကသွေးခွဲနေတာ ရွေးကောက်ပွဲဝင်တာမဝင်တာထက် nldကိုပျက်စီးအောင်သွေးခွဲနေတာ ခုလဲnld ကဘာမှဆုံးဖြက်ရသေးတာမဟုတ်ဘူး တိုင်ပင်တုန်းပဲရှိသေးတာ မဝင်ရင်ပါတီပျက်မယ် ပါတီပျက်ရင်ဦးဝင်းတင်တို့လို ထင်ရှားတဲ့လူတွေပဲ မီဒီယာနဲ့ စကားပြောရုံ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမူ့ပဲကျန်မယ် နားလယ်လား ကိုပေါ nldကလူတွေဟာခင်းဗျားထက်အဆပေါင်းများစွာတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ် အားလုံးကိုစတေးထားတဲ့လူတွေမစော်ကားနဲ့
နအဖ ကမဖြိုခွဲရပဲ ဒီမိုကရေစီသမားတွေလို့ဆိုသူတွေ အမျီုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ကိုဝိုင်းပြီးဖြိုခွဲနေလိုက်ကြတာ သူတို့ပြောသမျှကြားရတာ သူတို့ရေးသမျှဖတ်ရတာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတော့ရေစုန်မျော ပြည်သူတွေလည်းမောနေရမှာပဲ။
အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်က ပြိုကွဲလုနီးပါ ဖြစ်တာ ကြာနေပါပြီ။ နအဖ လုပ်သမျှ အခံချည်းဖက် နေနေရတာ ဒေါ်စု ဦးတင်ဦးနဲ့ ဦးဝင်းတင်နဲ့ အကျယ်ချုပ်အကျဉ်းစံတွေ ဖြစ်ကတည်းကပေါ့။ ဒီချုပ်က ခုမှ အ၀တ်စုတ် ဖြစ်တော့မှာ---- ခင်ဗျား တို့က ခုမှ ဘာလာပြီး ဒီအချိန်မှာ သိဒ္ဓိတင်နေတာလဲ။ ဦးဝင်တင်ကတောင် ထွက်ပါတော့မယ်လို့ ပြောနေပြီဟာကို-- အရေးထဲမှာ ဒီချုပ်အာဏာရူးတွေနဲ့ လာတွေ့နေတယ်။ လုပ်စားလို့ အားမရသေးဘူးလား
ပြည်တွင်းက အကျပ်အတည်းကို ခင်ဗျားတို့က ဘယ်လောက် စာနာ နားလည်လို့လဲ၊ အခု အပြင်ကနေ
ပြည်တွင်းကို ဝေဖန်နေသူတွေဟာ ပြည်တွင်းမှာတုန်းက
ဘယ်လောက်များ လုပ်ခဲ့ ကိုင်ခဲ့ အကျပ်အတည်းကြား
ရောက်ခဲ့ဖူးလဲ၊ သူများရောင်တိုင်း လိုက်မရောင်ပါနဲ့
ကိုပေါ၊ နိုင်ငံရေးသမား အဝေဖန်ခံရတာ သိပ်မဆန်းဘူး၊
မသေချာတဲ့ နည်းလမ်းကြောင့် အချိန်ကုန် လူကုန်ဖြစ်တာ ပိုပြီး ဆန်းတယ်လေ ..
ကြုံတုန်း တခြားတွေမှာလဲ ပြောခဲ့တဲ့ ကျွန်တော်မြင်တာလေး ရွှီးပါရစေဗျ..
ကဲ.. ငါတို့ဒီမိုတွေမှာ ဒေါ်စုကစလို့ ဟော ဦးဝင်တင်တို့အလယ် ကိုမင်းကိုနိုင်တို့အဆုံး ရဲရဲတောက် တွေရှိပါတယ်ခင်ဗျ.. အဲ.. ခေါင်းဆောင်ကောင်းတွေ လို့တော့ ပြောတာပဲဗျာ.. ဟုတ်ကဲ့.. အဲလိုရှိရက်နဲ့ ဘာလို့များ ဒီလောက်အချိန်အကြာကြီး ဖြစ်နေပါလဲခင်ဗျာ.. ဘယ်အောင်မြင်မလဲ သူတို့က ထောင်ထဲရောက်နေတာလေ.. ဘာလုပ်လို့ရမှာတုန်း..
ရှင်းပါတယ်.. ထောင်ကျနေတဲ့လူတွေ သေနေတဲ့လူတွေဟာ နိုင်ငံကို ဒီမိုကရေစီ ရအောင် လုပ်ပေးလို့မရပါဘူး.. ဦးဝင်းတင်တောင် ထောင်ထဲနေတဲ့ နှစ်ပေါင်းအများကြီး အပြင်မှာရှိရင် ဘယ်လောက် များအသုံးဝင်လိုက်မလဲခင်ဗျာ.. ဒီတော့ ငါထောင်ကျရဲတယ်ဆိုပီး ထောင်ထဲသွားနေပြတာ ကိုယ့်အတွက် နာမည်လေး နဲနဲ တက်ချင်တက်လာနိုင်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုအရေးအတွက်တော့ တိုးတက်မှု သုံညလို့ မောင်သတိမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ.. ဒါကြောင့် အဲလို မိုက်တော့မိုက်ပါရဲ့ အကျိုးမရှိတာတွေ လုပ်ပြနေမဲ့လူတွေထက်စာရင် မောင်သတိဟာ ဦးအောင်ရွှေရဲ့ အယူအဆကိုတောင် အလေးထားမိပါသေးတယ်..
ခုသာ ကိုးလိုးကန့်လန့် ပြောနေခဲ့တဲ့လူတွေဟာ ခုသူတို့ နားနေတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ဟာ.. ခုသူတို့ ပြောနေတဲ့ ငါတို့ပါတီ အညံ့မခံဘူးကွဆိုတဲ့ ငါတို့ပါတီဟာ.. ခုသူတို့ ဖက်နေပြတဲ့ ရွှေဂုံတိုင်စာရွက်ကြီးဟာ ဦးအောင်ရွှေဆိုတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ရဲ့ အနစ်နာခံ ပေးဆပ်ထိန်းသိမ်းမှုတွေနဲ့ မဟုတ်ရင် ပြောစရာတောင် ကျန်နေမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာ စဉ်းစားမိပါရဲ့လားဗျ..
ခပ်ရှင်းရှင်းပြောရင် လူငယ်ကြိုက်လေး စတန့်ထွင် လိုက်ပြောရင်း ကဲပြလို့ရပါတယ်.. သူ့အသက်ရွယ်နဲ့ အစိုးရကလဲ ဘာမှခုထက်ပိုပီး ဖဲ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူး.. ဒီတော့ တကယ့်လက်တွေ့ ပါတီနဲ့ နိုင်ငံအတွက်လိုအပ်လာရင် ခုလို ၀ိုင်းဆဲလာကြမယ်ဆိုတာကို ဆန့်ကျင်ပီး လိုအပ်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်း လုပ်တဲ့သတ္တိ အန်အယ်ဒီဘယ်သူ့မှာများ တွေ့ပါလဲခင်ဗျာ..
အဆုံးသတ်မယ် ဆိုရင်တော့ဗျာ.. မောင်သတိဟာ ဘယ်လိုယုံကြည်ချက်ရှိတယ်ဆိုတာ ကိုပေါတို့ သိကြမှာပါ.. ဒါပေမဲ့ဗျာ.. ဦးအောင်ရွှေရဲ့ အနှစ်နှစ်ဆယ်လုံးလုံး အစိုးရဖိနှိပ်မှုကို ခံပီး ပါတီကို ထိန်းသိမ်းလာခဲ့တဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အတွေ့အကြုံနဲ့ ဆင်ခြင်မှုအရ ပြောလာတဲ့ အနေအထားတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ ကိုပေါတို့လို နိုင်ငံခြားကနေ ကီးဘုတ်လက်တင်သမားတွေက သူ့ရပ်တည်ချက်ကို ဝေဖန်တာမျိုးတောင် မဟုတ်ပဲ သူရဲဘောကြောင်သလေး ဘာလေး ပေါ့သွမ်းစွာ ဝေဖန်လှောင်ပြောင်ခွင့် ရယူနိုင်တယ်လို့ ခံယူပါလားခင်ဗျာ.. ဘာကြောင့် ဦးအောင်ရွှေ မှားနိုင်လဲ.. ဝေဖန်လို့ရပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ပရမ်းပတာ ကိုယ်ပြောသလို သတ္တိအရာခြင်း ယှဉ်ရအောင်ဗျာ.. သူ့အတွေ့အကြုံနဲ့ နိုင်ငံရေး သဘာဟာ ဒေါ်စုကို အခုခေါ်ပီး ဝေဖန်ခိုင်းရင်တောင် အဲလိုအသံမျိုး လုံးဝထွက်လာမှာမဟုတ်ပဲ ဒါဟာ တလေးတစား နားထောင်စရာလို့ ခံယူသွားမှာပါပဲ.. ဒါဟာ ကိုပေါပါးစပ်ကနေပဲ အမြဲအားကျပြနေတဲ့ ဆင်ခြင်စရာ လုပ်ရပ်တခုလို့ မောင်သတိတော့ မြင်တာပဲဗျို့..
ဟီးဟီး.. ရေခင်းပြနေရတာနဲ့ပဲ ရှည်သွားပြန်ပီး ကိုပေါရေ..
ဟုတ်လိုက်လေ ကိုသတိရေ ဦးကျော်ငြိမ်းရဲ့စကားကိုယူသုံးရရင်တော့ လူကြည်ညိုရုံ နတ်သာဓုခေါ်ရုံ အများအကြိုက်ကိုသာ လူပါးလုပ်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လူတွေများနေလို့တိုင်းပြည်ဒီလိုဖြစ်နေတာဗျ လုပ်သင့်တာကိုပြောရဲတဲ့လူရှားတယ်
ဆရာလူထုစိန်ဝင်းရဲ့ စကားတွေက လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ပါတီရပ်တည်ရေးထက် လူထုကို စည်းရုံးဦးဆောင်မှုပေးမယ့် လမ်းပေါ် ညီညီညွတ်ညွတ် ရောက်စေချင်ပါတယ်။ အကယ်၍ အမြင်မတူလို့ လမ်းခွဲကြရင်တောင် ရန်သူတွေဖြစ်မသွားကြပဲ ... “တို့ဗမာအစည်းအရုံးက ၉၁-ဌာနအုပ်ချုပ်ရေးကို ဆန့်ကျင်ခဲ့ပေမယ့် back-up plan အနေနဲ့ အခြားအမည်နဲ့ ပါတီတစ်ခုဖွဲ့ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဝင်စေခဲ့သလိုပဲ” ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။
အစစ်ပေါ့ကိုဧရာ ခုလဲnld ကမဆုံးဖြတ်ရသေးပါဘူး ခုလိုမညှာမတာပြောဆိုဝေဖန်တာက စော်ကားရာရောက်တာပေါ့ဗျာ ဒီမိုကရေစီပါတီတွင်းမှာကိုယ့်အမြင်ကိုတင်ပြဆွေးနွေးတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးတယ် ပြီးတော့ တဖက်နဲ့တဖက်ရန်သူတွေဖြစ်ကုန်မယ်
ပါတီရပ်တည်ရေးအတွက် အနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော် အတွင်းမှာစစ်အစိုးရရဲ့ မတရားဖိနှိပ်မှုတွေကို
ဘာတခုမှအတိုက်အခံမလုပ်ရဲ မပြောရဲဘဲ အမျှော်အမြင်ကြီးမားခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးသုခမိန်ကြီး ဦးအောင်ရွှေပေါ့။
စစ်အစိုးရနဲ့ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ချင်လို့ စစ်အစိုးရအငြိုအငြင်ခံပြီး ဘာဆိုဘာမှမလုပ်ခဲ့တဲ့ ရေရှည်အကျိုးစီးပွားကို ပါတီအတွက်အစဉ်ကြည့်ခဲ့သူကြီး ဦးအောင်ရွှေပေါ့။
ပါတီရပ်တည်ရေးအတွက်ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်ကြောင့် ရွှေဂုံတိုင်ကြေငြာစာတမ်းနဲ့ဆန့်ကျင်ဖက်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို သတ္တိရှိရှိချမှတ်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်ရွှေပေါ့။
အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးအချိုးအကွေ့အတွက် တာဝန်ခံဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့ မဆုံးဖြတ်ဘဲ စီစီတွေအားလုံးကိုခေါ်ပြီး လှိူ့ဝှက်မဲပေးမှုနဲ့ သမိုင်းဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြီးကိုချမယ့် ဒီမိုကရေစီမြတ်နိုးသူကြီး ဦးအောင်ရွှေပေါ့။
တာဝန်သိသူကြီး၊ သစ္စာရှိသူကြီး၊ သတ္တိကောင်းသူကြီးပေါ့လေ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သာမရှိရင် အဲဒီဦးအောင်ရွှေဆိုသူကြီးကို ဘယ်ခွေးဝဲစားကမှတောင် သေးနဲ့လှည့်ပန်းမှာမဟုတ်ဘူး။ ဂွေးသနလို့။
ကိုမြခင်ဗျားတော်တော်မိုက်ရိုင်းတာပဲ ခင်ဗျားလိုလူတွေများရင်တော့ .တယ်မလွယ်ဘူး
ကိုပေါတို့ကိုမြတို့က ဒီမိုကရေစီသမားမဟုတ်ဘူးတဇောက်ကန်း ကွန်မြူနစ်တွေ ကိုယ့်အယူအဆနဲ့မတူတဲ့လူကိုရန်သူလိုသဘောထားတယ်
Please listen Sunday talk program by RFA morning (7am) program. The speakers are Ko Aung Din, U Ohn Kyaing, Daw San San etc. Also you can hear U Nyan Win's comment. It's really interesting and there are signs that something fishy is going on inside the party.
ညွှန်းဆိုတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် ကိုကျော်ထင်ရေ။ ကျနော်အခုပဲ အပြင်ကပြန်ရောက်ရောက်ချင်း နားထောင်ပြီးသွားပါပြီ။ ဦးခင်မောင်ဆွေရဲ့ စနေနေ့ညက ပြောကြားချက်ဟာ အဖွဲ့ချုပ်စီအီးစီတယောက်ရဲ့ စည်းဘောင်ကို ကျော်လွန်ပြီး ပြောသွားခဲ့တယ်ဆိုတာ အင်မတန် ထင်ရှားသွားပါပြီ။ ဦးခင်မောင်ဆွေအပေါ်မှာ ကျနော်တို့ ဖြစ်နေတဲ့ သံသယတွေကို ပိုလို့တောင် ခိုင်မာသွားစေပါတယ်။
ပြည်ပရောက်ဆိုတာ နိုင်ငံရေးသေနေတဲ့ကောင်တွေပါငပေါရာ ။ မင်းကိုယ်မင်းဘာများအောက်မေ့နေလို.လဲ ။ အင်တာနက်ပေါ်မှာ လေပေါနေရုံနဲ. ဒီမိုကရေစီရမယ်ထင်နေသလား ။ ဘာမှဖြစ်မလာဘူး ။ စလုံးကနေ ဖင်ပြဲအောင်အော်နေလဲ ဘာမှဖြစ်မ်လာဘူး ။ မင်းလို ငါ့စကားနွားရ ပြောရုံပဲပြောတတ်တဲ့ကောင်တွေများနေလို. တော်လှန်ရေးကြီးကို စိတ်ပျက်သွားတဲ့လူ ဘယ်နှစ်ယောက်များ ရှိနေမယ် မသိဘူး ။ အစပိုင်းတုန်းကတော့ မင်းကို သိပ်မဆိုးဘူးလို. ထင်မိသေးတယ်ကွ ။ ဒါပေမယ့် ကြာလေ မင်းဟာငါ့စကားနွားရလောက်ပဲပြောတတ်တဲ့ကောင်ဆိုတာ သိလာလေ ....မင်းလိုကောင်ရဲ. ဦးဆောင်မှုတွေကို လှုံ.ဆော်မှုတွေကို စိတ်ပျက်လာလေပဲ ။ ဒီလောက်တက်ကြွနေရင် မင်းဦးဆောင်ပြီး စလုံးမှာ ကန်.ကွက်ဆန္ဒပြပွဲ တစ်ခုလောက်လုပ်ကြည့်ပါလား ။ ဘယ်သူများလာမလဲကြည့်ရအောင်။
If you want to stageaprotest, you don't need to wait Ko Paw to lead. You can go ahead and lead the protest with your excellent leadership skill if you think you are better than him. :))))
Waiting for your inviatation to all Myanmars in SG to join your protest.
Where you want to do? Speakers' corner? Orchard ? At MM embassy ?
Just you organize it and we'll see how many people will come forward.
Or if you are not in SG, share your protest news no matter where you are in this world.Pls arrow your face in the protest photo so that we can really admire you well (Note : pls don't play trick with photoshop).
You should also know one thing that the Juta care so much about the forces outside is not only because of their voices ( shoutings ). If you really want to know what they ( Junta) so scare, just approach the MI ( saut-htone department )and ask them.
Anonymous တစ်ယောက်ကလည်း ကတ်ကတ်လန်နေတာပဲ မတ်ခြောက်ကြီးလားမသိဘူး
Anonymous March 22, 2010 10:52 PM
ဒီတော့ ငါထောင်ကျရဲတယ်ဆိုပီး ထောင်ထဲသွားနေပြတာ ကိုယ့်အတွက် နာမည်လေး နဲနဲ တက်ချင်တက်လာနိုင်ပေမဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုအရေးအတွက်တော့ တိုးတက်မှု သုံညလို့ မောင်သတိမြင်ပါတယ်ခင်ဗျ..
What? people are willing to stay in jail bcos they want to gain status.Whatafunny idea. Every single leader is caught by this military regime. Please try another way to convince people. Ha Ha.
အခုဖြစ်တဲ့ ကိစ္စက ကြိုတင်စဉ်းစားသင့်ခဲ့တယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ စစ်တပ်က သူတို့အကွက်တကွက် ကလေးပဲ ရွေ့ရသေးတယ်၊ NLD ဘက်က အသေအလဲ လိုက်လုပ်နေရတယ်ဆိုကတည်းက တင်ကြိုပြင်ဆင်ထားတာ မရှိသလို ဖြစ်နေတယ်။ ဒီမိုကရေစီ လိုလားပါတယ်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့တွေကလည်း တဖွဲ့အကျပ်တွေ့မှ လိုက်အော်တာကလွဲပြီး ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်လဲဆိုတာမျိုးရှိသင့်တယ်။
စစ်တပ်ဘက် က တဆင့်ပြီးဆင့် တက်ဖိြု့ပင်ဆင်ထားပေမယ့် ဒီမိုအင်အားစုတွေက ပြင်ဆင်မှုမရှိတာဟာ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေကို ဒူတယ်ပြောနေတဲ့ ကျနော်တို့ပဲ ဒူနေတာလားဆိုတာ စဉ်းစားဖို့လိုပြီ။
နံမည်ခံကွဲပြီးတော့ ပါတီရပ်တည် ဖို့ ဆိုတဲ့ လှည့်ကွက်တွေ သုံးသင့်တယ်.. ကိုယ့်ဘက်က သိပ်ရိုးသား သိပ်မိုက်ပြစရာမလိုဘူး..
ပါတီက ထုတ်တယ်ဆိုတာထက် ထွက်တယ်ဆိုပြီးတော့ ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေလုပ်.. တဘက်ကလည်းရွေးကောက်ပွဲမှာ ထောက်ခံပါ လုပ်ရင် အဆင်ပြေနိုင်တယ်..
The restaurants list with thousands of restaurants reviewed by visitors. http://restaurants-us.com/tx/Montgomery/Panda%20Village/77356/